कोरोना भुतको आतङ्क | We Nepali
नेपालको समय: १३:११ | UK Time: 08:26
कोरोना भुतको आतङ्क
२०७६ चैत २० गते १९:०८
नदेखेको भूतप्रेत भनेको सुन्ने बितिक्कै मुटु ढक्क फुलेर आउने, आङ् जिरिंग हुने, हातगोडा चिस्सिएर आउने, शरीरका रौं ठडिन थाल्ने, एकोहोरो भएभरका भगवानको नाम मुखमा आउने गर्दछ । नत भुतको कुनै धर्म हुन्छ, नत संस्कृति नै । यिनीहरुले बच्चा, बूढो, धनी, गरिब, ठूलो, सानो, गाउंले, शहरिया, राम्रो नराम्रो, होचो अग्लो र देश विदेश केही भन्दैन भन्छन् । दिमागमा एउटा अनौठो भयानक डरलाग्दो कल्पना दृष्यको सृजना हुन्छ । रातको १२ बजे घरबाट बाहिर ननिस्कनु कालो छांयाको रुपमा, सामान फाल्ने र रांको हातमा लिएर हिंड्ने गर्छ भन्छन् । मुटु कमजोर भएकालाई ठाउंको ठाउं नै ठहरै बनाइदिन्छ र मन कमजोर हुनेलाई पागल भन्छन्। भनाइ छ, भुत लाग्यो भने मुटु फुटाली रगत छदाई मारी दिन्छ ।
के सांच्चिकै भुत हुन्छ त ? के यसले सांच्चिकै तर्साउंछ ? के यिनीहरुले सबैलाई मार्न चाहन्छन् त ?
प्रसंग हो- कोरोना भाइरस वा कोभिड १९ को । यो विश्वमा पनि बेलाबेलामा भुतले जस्तो नदेखिइकन विभिन्न किसिमका भाइरस र ब्याक्टेरियाहरुले हल्लाखल्ला र कोलाहल मच्चाइरहेका छन् भने धेरैलाई शिकार बनाएका छन् ।
भुतलाई त धामीझांक्रीले रातभर, पूजापाठ, तन्त्रमन्त्र, ढ्याङ्ग्रो ठोकेर, कुखुराको भाले काटी रगत चढाएर मन्साउने गर्छन् र भोलिपल्ट बिहान सब जस्ताको तस्तै हुन्छन् । मानिसको भुत आतंक झांक्रीको उपचारले आत्मबल बढाएर ठीक हुन्छ । तर यो कोभिड नामको भुत निकै कडा तरिकाले मान्छेको जीवन लिने र बांचेकालाई मानसिकरुपमा मन मस्तिष्क र मुटुमा डेरा जमाउंदै छ । यसलाई बेलैमा फाल्न नसकेमा मानिसको जीवन र मानसिक र रुपमा तहसनहस पार्ने पक्का देखियो।
एक महिना अगाडिसम्म सबैका आ आफ्ना जीवनका योजना थिए । के गर्ने ? कसो गर्ने ? कहां जाने ? कसलाई भेट्ने ? आदि इत्यादि । तर, आज मुलुकहरु लकडाउनमा परेका छन्। रांके भुतले लखेटेको जस्तो यो कोरोना भाइरस चीनदेखि विश्वभर मानिसको पछि लागेको छ, हजारौंलाई मारेको छ, घाइते बनाएको छ । हेर्दाहेर्दै हिजोका खुशीका योजनालाई आज एकाएक डरलाग्दो र कल्पनाभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा खडा गरिदिएको छ । कतै हिंड्न, भाग्न नसक्ने गरि कोठामा जकड्याएको छ ।
भुतको लागि त रातको समयमा कुनै एक ठाउंमा मात्र बाहिर ननिस्कनु र नजानु भनिन्थ्यो तर यो भाइरसले पूरै विश्वलाई नै चुनौती दिएको छ र सबैलाई आ आफ्नै घरभित्र नजरबन्दी बनेर बस्न बाध्य पारेको छ । हैन भने सबैलाई छोप्दै, पछार्दै, चिहानको बाटो पो देखाउंछ त यसले।
यो चलायमान संसार अहिले ‘लकडाउन’ बाट सुनसान भएको छ । घर बाहिर निस्किनु, साथीभाइ, इष्टमित्र भेट्नु आफैंमा खतरनाक बनाएको छ । भाइरस लागेर बिरामी पर्नु, आफन्तलाई लागेको सुन्नु र चिनेजानेको कसैको मृत्यु सुन्दा निकै ठूलो कहाली, डर र त्रास मनमा उत्पन्न हुन्छ । त्यही त्रादसीका वातावरणमा बस्नु पर्दा मानिसहरु मानसिक रुपमा निकै कमजोर र त्रसित भएका छन्।
यस वर्षको सुरुवातसंगै फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मानिसलाई यो अवस्थामा पुरयाएको छ कि छोराछोरी, बाबुआमा, श्रीमान, श्रीमती र साथीभाइ समेतको भेटघाट छैन् भने आफन्तहरु अस्पताल हुंदा, मृत्यु हुंदा पनि अन्तिम संस्कार गर्न र दुःखको घडीमा साथ दिनसम्म पाएका छैनन् । दैवको अगाडि इन्द्रले त घुंडा टेकेका थिए रे । यो भाइरसका कारण मानिस कति लाचार, असहाय र निरीह भएका छन् ।
विश्वकै शक्तिशाली मानिसहरु, शासक, धनी, विद्वान, वैज्ञानिक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको आत्मबललाई यो भुतले कमजोर बनाइदिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको आगाडि मानिसको केही लाग्दैन भन्ने कुरा समय समयमा यस्ता भाइरसहरु र ब्यक्टेरियाहरुको उत्पत्ति, ध्व‌ंशहरुले देखाइसकेका छन् । यो अहिलेको कोरोना भाइरस मार्न विश्वका वैज्ञानिकहरू औषधिको खोजीमा जुटेका छन् भने स्थानीय धामीझांक्रीले मानसिक रुपमा कमजोरलाई आत्मबल बडाउन अगाडि बढिरहेका पनि होलान् र हुनेछन् ।
कस्तो समय आयो ? आफन्त, परिवार सदस्य, साथीभाइ, इष्टमित्रदेखि डराउनु पर्ने ? कस्तो दिन आयो मानिससंग मानिस डराउन पर्ने, बाहिर हिंडडुल गर्न नहुने, यो कस्तो महामारी हो जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने ? यस अवस्थामा हाम्रो सोच र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सकेमा केही हदसम्म यसको असर कम गर्न सकिन्छ। सबैले आजको आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुले देखाएको बाटो कठिन भएपनि हिंड्ने कोशिस गर्यौं भने अवश्य पनि कोरोना भाइरस वा ‘कोभिड १९’ को भुतलाई शान्त बनाएर सधैंका लागि मन्साउन सकिन्छ ।
त्यसैले आज जे छ त्यसमा रम्नु, परिवारसंग रमाउनु र मानसिकरुपमा आफूलाई सकारात्मक कृयाकलापमा ब्यस्त गर्नु यसको मानसिक असरबाट बच्ने उपाय हुन् । भोलिको दिन कसले देखेको छ र भोलि के हुन्छ भन्न गाह्रो छ । यस बारेमा बढी नसोचौं । कथाको भुतबाट बच्न मानिसका बीचमा बस्नुपर्छ भनिन्थ्यो, यो कोरोना भुतबाट बच्न एक्लै बस भनिन्छ । हामीले धैर्यताका साथ एकान्तमा रहेमा, हात पटक पटक धुने गरेमा यो कोरोना नामक भुत पनि संसारबाट छिट्टै हटाउन सकिने कुरा भने पक्का छ ।
लन्डन, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)